အသစ်အရူးစီမံကိန်းကိုသဘာဝတရားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရထားလမ်းကူးသွားပါလိမ့်မယ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 07 Antalya, 38 Kayseri, 42 Konya, 50 Nevsehir, 68 Aksaray, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
နောက်ဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ် (EIA) အစီရင်ခံစာ၏ Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) လိုင်း, ထို EIA ကို 10 ဇူလိုင်လအတွက်အပြုသဘောဆုံးဖြတ်ချက်ပေးထားခဲ့သည်။ စိတျအပိုငျး 4, 607 566 + -kilometer-ရှည်လျားလိုင်း, သဘောသဘာဝ, အသက်ရှင်ခြင်းပါဝင်သည်ဟု, ရေအရင်းအမြစ်များနှင့်မြေသြဇာကောင်းသောလယ်ကွက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစားသုံးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို 66 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, 24, 102 ထိပ်တန်း viaducts, 391,5ဘူတာရုံ underpasses ။ ဖြည့်စွက်ရန် 9.7 ဘီလီယံအထိ။
တစ်နေ့နေ့မှာ သတင်းစာ Erkin Acarer Antalya, Seydişehir, Konya, Aksaray နှင့်ဆိုက်5အချက်အပါအဝင် Avanos ၌တည်လိမ့်မည်ထံမှတစ်ဦးအစီရင်ခံစာအရသိရသည်။ အဆာမြေ၌သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ တူးဖော်အတွက်7ပိုပြီးသိုလှောင်ရန်နေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှစ်ပေါင်း4ယူပါလိမ့်မယ်။ "ငွေကြေး, ဗဟို Anatolia ပြန်လည်ပါလိမ့်မည်ရရှိခဲ့ခံရဖို့ကိုတိုးပွါးစေခရီးသွားဧည့်သန်းပေါင်းများစွာသောတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာများကို!": အဆိုပါရည်မှန်းချက် Antalya အတွက်အခြားမြို့များမှခရီးသွားဧည့်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
စီမံကိန်းပထမဦးဆုံးကန့်ကွက်သည့်ခေတ်ပြိုင်ရှေ့နေများအသင်း (CHD) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် Antalya ဘားအသင်းမှရှေ့နေကိုလည်းMünipရှိပါတယ်, İbradi Antalya မြူနီစီပယ်မှ လာ. "အသစ်တစ်ခုကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်လိုင်း Antalya အတွက်သဘာဝဥယျာဉ်နှင့်သဘာအထိမ်းအမှတ Canyon အ, ရေကန်Beyşehir၏သဘောသဘာဝ၌, ရေတံခွန်ရှိ Lead ။ အကြောင်း, မျဉ်းİbradiသိသိသာသာအချိုးအစား, သစ်တောသဘာဝအဧရိယာ, Altinbesik အမျိုးသားဥယျာဉ်ဖြစ်ပါတယ်, အ protected ဧရိယာ status ကိုအတွက်ယခုÜzümdere says: "! Buralar အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့်အစီရင်ခံစာအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာ, ဒါပေမယ့်ရွေးကောက်ပွဲများ၏ပထမဦးဆုံးဒီဂရီမှာ"
Antalya ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာတွင်စတင်လိုင်း, မသာဒီဒေသမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Manavgat မြစ်၏တက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလမ်းကြောင်း၏အနောက်ဘက်မှာတော့ Perge, Aspendos, ရှေးဟောင်းမြို့နှင့်တစ်အရည်ပျော်Üzümdereဧရိယာရဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ Burdur မှပင်ချိတ်ဆက်အနောက်ပိုင်းလက်စွပ်လမ်း Duzlercami Bucak- အောက်ပါ, သစ်တောဖြတ်သန်း, Antalya ဆိပ်ကမ်းမှစတင်ကာ; Duzlercami ရဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာနှင့်အတူတောအုပ်၌မြေလွတ်မင်ရှေးဟောင်းမြို့ဇာတိမြေမှာတည်ရှိပါတယ် Termessos ။ အစီရင်ခံစာမှာ, ရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဘို့အရှုပ်တော်ပုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များပါဝင်သည်။ "သူတို့ကဤအရပ်မှလာမယ့်မှရှောင်ကြဉ်မည်။ " ရှေ့နေများရှိသည်, အသုံးအနှုန်းတွေသုံးပြီး "ဝက်ဝံသည်သမင်ဒရယ်, တောင်ဆိတ်, မြေခွေး, ဝံပုလွေကိုသင်စိတ်ထဲလျှင် 'လို့သူတို့ဆိုသည်ကားရှောင်ကြဉ်ပါ" ။ သို့သျောလညျးစကျင်ကျောက်ကျောက်မိုင်းများနှင့်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ (HPP) နေသောအရပ်တို့ကိုမရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒေသတွင်း၌အသက်ရှင်သောအာကာသနှင့်အတူတိုက်ရိုက်သွားပါလိမ့်မည်!
ချိုင့်, viaducts လွန်သွားပါလိမ့်မယ်။ 12 ဥရောပတိုင်းပြည်စုစုပေါင်းအပေါ် Taurus တောင်တန်းများတွင်အစုလိုက်မျိုးစိတ်နှင့်အတူတူးမည်ဖြစ်ပြီးဒိုင်းနမိုက်ဖောက်ခွဲလိမ့်မည်။ အဲဒီစီမံကိန်းကသာရှေးဟောင်းမြို့ကြီးများ, အစိမ်းနေရာများ, ရေအရင်းအမြစ်များကိုနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်လမ်းအစုလိုက်မျိုးစိတ် No ပါလိမ့်မယ်။
လိုင်း, ဘားရေလက်ကြားကာကွယ်ထားဒေသများထံမှ Burdur မှဖွင့်လှစ်။ Isparta, Sütçüler, Konya, Beyşehir, Meram, Seljuk နှင့်အတူ Aksaray, Eskil သို့ရောက်ရှိ။ Nevsehir, Acıgöl, Avanos, Urgup နှင့် Kayseri, Kocasinan İncesuနှင့်အတူမြို့ရွာမှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။ Nevsehir, အန္တရာယ်မှာ Cappadocia အတွက် Goreme တူသော Konya Meram ။ ပါဝါ, EIA ကိုစောဒကတက်တဲ့ "အရူးစီမံကိန်းကို" ။ သို့သော် Encon ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီလောင်ဖို့သဘောသဘာဝ, သမိုင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအစီရင်ခံစာ၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပြင်ဆင်နေသည်။ တစ်ဦးအဆင်သင့် EIA ကိုအစီရင်ခံစာ 1 / 100.000-စကေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုခံယူနိုင်ရန်အတွက်ကိုလည်းအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်နေကြသည်ကိုသတ်မှတ်။
က "အဓိကရည်ရွယ်ချက်" ပေါ်တွင် YHT စီမံကိန်းတွင်အဆိုပါကန်ထရိုက်တာများနှင့် rant သိရန်ရရှိရန်အလုပ်အခွင့်အလမ်းပေး, တူရကီရဲ့စျေးကွက်၏ဘဏ္ဍာကိုဖယ်ရှား! ကျွန်တော်တို့ကိုဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြပါရစေ။ လိုင်းအခြားမြို့များမှဆက်သွယ်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင်ရာအရပ်ကိုကြာသောလိုင်းချိတ်ဆက်တူရကီ Kolinda 17 ကုမ္ပဏီ၏နူးညံ့အပါအဝင် Yerkoy, Kayseri ။
သို့သော် Antalya Burdur, Isparta အတွက် EIA ကိုအစီရင်ခံစာအစီအစဉ်တစ်ခုထူးခြားတဲ့ကြေညာချက်လျှက်: "Yeşilovaခရိုင်နှင့်စီရင်စုနယ်အတွင်းရှိ Manavgat, Serik, Korkuteli, Gölhisar, Karamanli, 1 ဒီပြည်နယ်မှာ။ နှင့်2။ ဝန်ဆောင်မှုများကိုမျှမျှတတကြီးထွားစေရန်, အရွယ်အစားတစ်ဒီဂရီကိုအာရုံစိုက် ... "အဓိပ်ပာယျ; ဟိုတယ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး။
စီမံကိန်းလုံးကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဒေသမှာတော့ 644 အမိန့်အမှတ် (HVAC) တွင်အမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြဝန်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ မြူနီစီပယ်အဘယ်သူမျှမပြောရှိသည်။ 10 သတင်းအချက်အလက်အစည်းအဝေးတွင်စီမံကိန်းအားဇူလိုင်လ 27 ကျင်းပခဲ့သည်ဇူလိုင်လထဲမှာအစီရင်ခံစာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေမှုကိုလည်း expropriation စီမံကိန်းကို Clamp ။ ရွာသားများ "သင်စီးပွားရေးကြွယ်ဝချမ်းသာအကြောင်းကိုရောက်စေဖို့လိုင်း" လို့သူကလှည့်ဖြား။ သို့သော်ရွာ၌ရပ်တန့်မည်မဟုတ်!
ဓါတ်ရထားသည့် Mert မြစ်ကူးသွားပါလိမ့်မယ် 07 / 11 / 2015 ဓါတ်ရထားသည့် Mert မြစ်ကူးသွားပါလိမ့်မယ်: အ Samsun Tekkeköy၏အရှေ့ပိုင်းဒေသများအတွက် Mert မြစ်တံတားမှတဆင့်အလင်းရထားလမ်းလမ်းကြောင်းမှတက်တိုးချဲ့ထို့ကြောင့်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်, အလုပ်တံတားတိုးချဲ့အပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့မြစ်စနစ်၏ပင်လယ်ဘက်မှာတံတား၏ Mert အလင်းရထားလမ်းသောအဘို့ကိုတံတားယာဉ်ကြောများ၏အပိုင်းအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းကိုရထားစနစ်စီမံကိန်းတံတား၏လက်ရှိအပိုင်းစတင်ခဲ့ပြီးခံခဲ့ရမှုအတွက်လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်တံတားပေါ်တွင်အလုပ်၏နယ်ပယ်အားလုံးမော်တော်ယာဉ်အသွားအလာမှခွဲဝေလိမ့်မည်ချဲ့ထွင်ရန်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းများ၏ရလဒ်စက်ဘီးနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသေချာစေရန်အလို့ငှာ, ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်ယခုနှစ်482 မီတာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မီတာရှည်လျားရှိပြီးသားတံတားရဲ့အဆုံးမှာပြီးစီးလိမ့်မည်။ ...
Hale ကပို Crazy Crazy စီမံကိန်း Havaray'l ဆောင်ကြဉ်း 19 / 06 / 2012 စီမံချက်၏ထောင့်အရ, channel ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကအစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်လေ့လာမှုတစ်ခုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်ပြုရထားလမ်းစနစ်ကလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, စက်ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာ Basri Köselerပေးတည်လိမ့်မည်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးလိုင်းများ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးနှစ်ဦးစလုံးအရပျကိုယူလိမ့်မယ်, ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပေးလိမ့်မည်။ Basri သူKöselerအန္တရာယ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုဝန်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန်ထံသို့စေလွှတ်စီမံကိန်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်ကလည်း, ဒါပေမယ့်သူကသူတို့ယခုအချိန်အထိမည်သည့်ပြန်ကြားချက်မခံမယူခဲ့ပါဘူးဟုပြောသည်။ Köselerလည်းချန်နယ်သစ်ဘို့ဒီဇိုင်းကိုပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားနျူကလီးယားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောစီမံကိန်းအားပြီးပြည့်စုံများကိုအာဏာပိုင်များကဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်။ မြျှောစငျမြားနှငျ့စဉျးစားဆငျခွသင်္ချိုင်းတွင်းကိုဖူး ...
အရူးမဟုတ်စီမံကိန်းများ, ဘေးဥပဒ်ကိုတပ် 16 / 12 / 2013 အရူးမဟုတ်စီမံကိန်းများ, ဘေးဥပဒ်ကိုတပ်: အတိတ်ကာလအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တစ်ဦးရေတဖြည်းဖြည်းအနက်ရောင်မြို့သို့လှည့်သည့်အခါ။ ဤသည်အစဉ်အမြဲမယ့်နိုင်ငံရေးတော့ဘဲအတွက်တက်ကြွလာခဲ့သည်။3။ တံတား,3။ လေဆိပ်နှင့် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်၏အခြေအနေတွင်အဆိုပါအခြေချစီမံကိန်းသည်သင်္ချိုင်းသို့သွားဒီနောက်ဆုံးသုံးကွင်း။ ရာကနေကြီးမြတ်မတရားမှုကိုစီမံကိန်းများကိုစတင်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ယခုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ snubbed မြို့ပြနှင့်ဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏သိပ္ပံသက်သေခံ။ မကြာသေးမီကကာလအတွင်းမှာလည်းဆီလျှော်အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှု။ နှစ်ဦးစလုံးပြင်ဆင်ခြင်းတရားသူကြီးတွေ, ကျွမ်းကျင်သောအစီရင်ခံစာသည်ဤစီမံကိန်းများနှင့်အတူဆက်လက်၏ဆန့်ကျင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ Yildiz နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခမှသည် ဒေါက်တာ Betul Sengezer Channel ကို ...
24ဘီလီယံကိုပေါင်စီမံကိန်းကိုကမ္ဘာ့တပ်မတော်မိတ်ဆက်ပေးဦးမည် 16 / 02 / 2016 ဥရောပမှအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်အသစ်တခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိတ်ဆက်မည်, ကြည်းတပ်:24 ဘီလီယံကိုပေါင်စီမံကိန်းကိုကမ္ဘာ့တပ်မတော်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြည်ပမှာအနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသည်ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် join တံ့သောပြင်သစ်အများကြီး-4 စီမံကိန်းများတွင်ကျင်းပခဲ့သည့်အိမ်ခြံမြေပြပွဲ။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်း,24 ဘီလီယံကိုပေါင်စီမံကိန်းကို၏တန်ဖိုးကိုရှာဖွေတာတွေအကြောင်း, 15-18 ဟာအများကြီး-ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အိမ်ခြံမြေပြပွဲတက်ရောက်ခြင်းမတ်လအကြားပြင်သစ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 400 သန်းÜnyeဆိပ်ကမ်းကိုစီမံကိန်းများအတွက်အဆင်းလှသော, 320 သန်းပေါင် Ordu-Giresun လေဆိပ်, 120 သန်းပေါင် Meletti မြစ်စီမံကိန်းနှင့် 50 သန်းပေါင်Çambaşıနှင်းလျှောစီးရဲ့ Facility မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းစီမံကိန်းများပါဝင်သည်။ တပ်မတော် ...
traffic Gaziantep OSB ၌ဤစီမံကိန်းကိုအနားယူဦးမည် 13 / 06 / 2016 Gaziantep ဖှဲ့စညျးစက်မှု (GAOSB) 3: ယာဉ်အသွားအလာအတွက် Gaziantep OSB ဤစီမံကိန်းကိုအနားယူပါလိမ့်မယ်။ ယာဉ်အတွက်ရှေ့ 420 မီတာရှည်လျားမြေပေါ်စီမံကိန်းအား၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကတည်းကလူမှု်ဆောင်မှုများခရိုင်, အဆိုပါယာဉ်ကြောကုစားလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ gaosb ထံမှစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ, မီးရထားတန်းဖြတ်ခုံးကျော်တံတားများတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့် Landscaping အလုပ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာရောက်နေပါတယ်။ ဒါဟာဧပြီ3ယင်းမြေပေါ်စီမံကိန်းတွင်ကန်ထရိုက်ခဲ့သည်။ OSB ရထားလမ်းအဆင့်ကိုဖြတ်အကူးအပြောင်းအတွက်ကြုံတွေ့ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမြင်များ GAOSB ဥက္ကဋ္ဌ Deniz မူရင်း 420 မီတာရှည်လျားမြေပေါ်၏နည်းလမ်းများအားပေးပြီးမှအဆိုပါကြေညာချက်သူ 100 ရက်အတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ GAZİRAYမြေပေါ်စီမံကိန်းအား ...
အဆိုပါအသံအတိုးအကျယ် 52 အကြီးဆုံးကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှစ်ဆတိုးလိမ့်မည် 03 / 04 / 2014 စီမံကိန်းအကြီးဆုံးကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအသံအတိုးအကျယ်နှစ်ဆလိမ့်မယ် 52: အခြေခံပညာသင်တန်းပေးသူလေယာဉ် (Bei) ခေါ်ဆိုမှုအဆိုပြုချက် file ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်, 8 ကုမ္ပဏီတခုအဖြေရှိသည်ဖို့စဉ်းစားသည်။ multipurpose ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ရဟတ်ယာဉ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီမံကိန်းအဆိုပြုချက်ဖိုင် (RFP) ခေါ်ဆို output ကို,5ကုမ္ပဏီများသည် (အဲယားဘတ်စ်ရဟတ်ယာဉ်, နယူးဟမ်းရှားစက်မှုလုပ်ငန်း, AgustaWestland, Sikorsky နှင့်ဘဲလ်) ဖိုင်ကိုတယ်။ ဇွန်လသည်အထိလေလံပေးရန်ရှိသည်ကဤကုမ္ပဏီများသည်၏တန်ဖိုး 16 ။ 52 မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်တစ်နှစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့ကြ, က SSM ဖို့အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ R & D ကိုစီမံကိန်းများနှင့်အတူဖြေဆိုရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဤသည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးကိုလည်းမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်တွင်ထင်ဟပ်။ အဆိုပါ 1 ဘီလီယံပေးရန် R & D အသုံးစရိတ်သည်နှင့်အညီတူရကီမူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့အစည်း (TPE), ...
Salt Lake သဘာဝနှင်းလျှောခြင်းနှင့်ဆီးနှင်းအတူတူ 22 / 01 / 2015 နှင်းလျှောစီးဆားအိုင်ဆီးနှင်းသဘောသဘာဝများနှင့်ပေါင်းစပ်: လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါရိုက်တာ Ahmet Sancar, ဆားစကီးစင်တာရာသီဖောက်တံအတူတကွအလုပ်လုပ်သောသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်မီ။ သူတို့အားလပ်ရက်ရာသီ Sancar ဖွင့်လတံ့သောစာသင်၏နိဒါန်းနှင့်အတူဆားနှင်းလျှောကျောင်း, လူတိုင်းအတွက် Salta နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေ, Yeşilovaအပေါ်Yeşilova 2015 နှစ်ပေါင်းနှင်းလျှောစီးရာသီအတွက် Salta နှင်းလျှောစီး Center ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Hasan သားမွေး, လွှတ်တော်အမတ်များလေယာဉ်ဆင်းသက်သူတို့လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါရိုက်တာ Ahmet Sancar များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူဖွဲ့စည်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု၎င်းတို့၏အလိုတော်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, အ protocol ကို, အားကစားသမားများနှင့်နိုင်ငံသားများ၏အခြားအဖွဲ့ဝင်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ် သူကပြောပါတယ်။ Bumpy လမ်း ...
Izmir ဂလားပင်လယ်အော် Crossing စီမံကိန်း, အသဘာဝတရားအစည်းအရုံးတုံ့ပြန်မှု 16 / 11 / 2017 Izmir ဂလားပင်လယ်အော်အဝေးပြေးအကူးအပြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြီးထွားလာနေပါတယ်။ သဘာဝတရားလူ့အဖွဲ့အစည်း, EGEÇEP, Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာအောင်၏ပင်လယ်ကွေ့ "အပြုသဘောဆောင်သော" ချိတ်ဆက်စီစဉ်ထားအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတံတားစီမံကိန်းများဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားစွဲဆို 85 လူများဆုံးဖြတ်ချက်၏ပလပ်ခြင်းမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ အထူးကုသို့မဟုတ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သဘာဝတရား Society မှာသားကိုမွေးကြောင်း Flamingo ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဧရိယာ၌ feed ကိုစီစဉ်ထားကြောင်းထင်ရှားခဲ့သောပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေး, hatching Flamingo ၏အကြောင်းကို 35 တထောင်အားလုံး၏ 20 နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့် Gediz မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများ, ပညာရှင်များနှင့်အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အကူးအပြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏အတိတ်နေ့ရက်ကိုကျော်, Aziz က Kocaoglu "ရှိပါတယ်ပင်လယ်ကွေ့။ သူတို့ဟာသူ Izmir လိုပါကကြှနျုပျတို့ပွုပြောကြပါတယ်။ ငါအရှိဆုံးမဲတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကငါ့အစ်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan ...
အဘယ်အရာကိုသဘောသဘာဝမဟုတ်သလိုသမိုင်းကိုနားထောင် high-မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း 19 / 02 / 2013 အဘယ်အရာကိုသဘောသဘာဝကိုနားထောင် high-မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းယခုနှစ် 29 အလုပ်ကအများကြီးတန်ဖိုးများကိုယူပြီး, အောက်တိုဘာလအတွင်းကြီးထွားဖို့နောက်ဆုံး Sprint high မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းဆက်လက်အဘို့စီစဉ်ထားဘာနေ့စွဲဖြစ်ပါတယ်။ နှောင်းပိုင်းတွင်သမ္မတနိုင်ငံ၏သမိုင်းဝင်ရပ်ကွက်အတွင်း၏ပျက်စီးခြင်းကိုရောမခေတ်ကနေချိန်းတွေ့ tombs ပြီးနောက်နေ့, ယနေ့ထင်းရှူးပင်တပင်ရာချီဖြိုချခဲ့ကြသည်မြို့ထဲတွင်မီးရထားလမ်းတလျှောက်တွင်ဖွင့်စီတန်း။ မဖယ်ရှားအားလုံးပြတင်းပေါက် 40 မီတာသစ်အယ်သီးများတွင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် linden သစ်ပင်များနှင့်အတူစီတန်းလမျးလြှောကျသှားခွငျးဧရိယာ၌ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားခံရဖို့သားကောင်များgitti.yüksekမြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအခြေခံအဆောက်အအုံMaşukiyeမှထင်းရှူး-မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းရာပေါင်းများစွာမသေချာမရေရာမှုများသည်ဤဆက်စပ်သောစဉ် quarry ခဲ့ကြသည် ...
လွမ်းဆွတ်ရထားသင်္ဘောသဘာဝအခင်းအကျင်းအတူ 14 / 01 / 2019 ရထားများနှင့်လွမ်းဆွတ်ရှုခင်းများဖြင့်လိုက်ပါသွားတစ်ခုမမေ့နိုင်သောခရီးချင်သောသူတို့သည်ခရီးသွားလာကြိုက်တတ်တဲ့။ လူကြိုက်အများဆုံးလိပ်စာများ Adana ထံမှ Izmir မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းဆွဲနိုင်ပါတယ်အဖြစ်မကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သူ Kars နှင့်ဗန်, ထွက်ရပ်နေ၏။ အထင်ကြီးစရာရှုခင်းများဖြင့်လိုက်ပါသွား, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမီးရထားစီးနင်းဆွဲဆောင်မှုအပေါ်ခရီးသွားလာချင်သောသူတို့အားကအဆင်ပြေနှင့်အမှတ်ရစရာပါစေ။ Kars ထံမှလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်သော Orient Express ကိုအတူသွားကြဖို့တတ်နိုင်ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), အရှေ့တိုင်း Express ကိုရထား၏အောကျတစျခု, တူရကီနှင့် Kars အကြားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်, ဖြူ Kars ပတ်ရစ်အတွက်စာသင်အားလပ်ရက်၌ကြီးသောအတိုးနှင့်အတူဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ဇန်နဝါရီလ 21 1 နှင်းအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ...
Kayseri Konya, Aksaray, Nevsehir အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား
traffic Gaziantep OSB ၌ဤစီမံကိန်းကိုအနားယူဦးမည်
အဆိုပါအသံအတိုးအကျယ် 52 အကြီးဆုံးကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှစ်ဆတိုးလိမ့်မည်
Salt Lake သဘာဝနှင်းလျှောခြင်းနှင့်ဆီးနှင်းအတူတူ